Vaovao - Fantatrao ve ny fivoaran'ny telefaona finday? Tena nanova ny fiainanay izany
Fantatrao ve ny fivoaran'ny telefaona finday? Tena nanova ny fiainanay izany
Raha miresaka momba ity vokatra ity dia tsy maintsy nisy olona nahita an'io. Raha ny tena izy, raha lazaina amin'ny fomba hentitra, ity vokatra ity dia tsy azo antsoina hoe finday. Ity fitaovana ity dia niseho tamin'ny taonjato faha-20, fony i Shanghai no tanàna voalohany nanokatra gara fitobiana. Taorian'izany dia niditra tamin'ny fomba ofisialy ny tsena sinoa ny fitaovan'ny BP. Mikasika ny fiasan'ity fitaovana ity, ny sasany amin'ireo taranaka taorian'ny taona 80 izay nampiasa azy io dia mety hahafantatra fa rehefa mila ny namanao na ny mpanjifanao hifandray aminao ianao dia mila ilazao azy ireo mialoha ny nomeraonanao. Avy eo, rehefa mila mifandray aminao izy ireo, dia hahita tobim-panafihana ary hampahafantatra an'ity sehatra ity ny nomeraonao. Farany, hampahafantatra anao ilay sehatra, ka azonao izany Raiso ilay hafatra nantsoina mba hahafahanao mahazo tranoheva finday eo akaiky hiantsoana. Amin'ny fijerena io fizotran-javatra io dia ahafahantsika mahafantatra fa ny fifandraisana tamin'izany vanim-potoana izany dia tsy dia nety loatra, ary tsy nahatratra ny asany ara-potoana izany.
Raha miresaka an'io endrika finday io dia manakaiky kokoa ny fiainantsika moderina io. Ity vokatra ity dia novokarin'i Motorola tamin'ny 1973. Ny fisehoan'ny telefaona finday dia maneho fa tena manana telefaona finday ny olona. Ao amin'ity vokatra ity dia misy efijery LCD sy andiana bokotra. Raha ny fahitanay azy, angamba antso an-tariby fotsiny ity vokatra ity. Raha ny marina dia manana asa maro izy, toy ny filalaovana lalao, fandraisam-peo ary MP3.
Ity milina ity dia niseho voalohany tany amin'ny firenena vahiny, tamin'ny fifanakalozana an'izao tontolo izao, ny firenentsika koa dia nanomboka nampiditra ity vokatra ity. Tamin'ny 1987, Guangdong no nitarika ny famitana ny fifandraisana. Taorian'ny fisehoan'ity vokatra ity tany amin'ny tanibe dia nalaza be tamin'ny olona izany. Saingy, noho ny vidiny lafo tamin'izany fotoana izany, nihevitra ny olona fa raha misy manana masinina toy izany, dia ho mpanao jadona eo an-toerana raha ny hevitray ankehitriny. Taty aoriana, niaraka tamin'ny fandehan'ny fotoana, nanomboka niseho ireo vokatra vaovao. Tamin'ny taona 2001, ny telefaona finday dia nesorina tamin'ny fotoana, izay tena lasa teny manan-tantara.
Ny fiavian'ny Era finday 2G
Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia, vokatra finday vaovao no niseho tamin'ny fiainantsika. Na dia misy lanjany lehibe ho an'ny telefaona finday aza ilay finday teo aloha dia be loatra ny habeny ary tsy mora entina izy io. Noho izany, namorona finday kely sy maivana ny olona. Ankoatr'izay, amin'ny lafiny teknolojia fifandraisana, ny olona dia namorona teknolojia 2G. Ity karazan-telefaona finday ity izay afaka mifandray amin'ny tamba-jotra 2G dia afaka manampy fiasa tsy nisy teo alohany tamin'ny fampiasana an'ity tambajotra ity, toy ny fahaizana mandefa mailaka sy rindrambaiko amin'ny hafa. Ho an'ity karazan-telefaona finday ity dia misy ihany koa ny marika malaza sasany, toy ny Nokia, izay manome antsika fahatsapana lalina. Nalaza indrindra tamin'izany fotoana izany, satria ny kalitaon'ny telefaona findainy dia tsara loatra ka na dia nianjera tamin'ny tany aza dia mbola mety ho simba ihany.
Andao hiresaka ny fomba fisehoan'ity finday ity. Eo amin'ny lafiny fisehoana dia misy karazana endrika maro. Ohatra, misy ny manosika manosika, ary misy karazany maro isan-karazany koa, toy ny flip-flop, flip-flop, ary ankehitriny ny fomban'ny efijery lehibe, izay isan-karazany hisafidianan'ny olona.
Tonga ny fahendrena sy ny hery
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia misy antsika, alohan'ny namoronana ny tambajotra 2G ny olona dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takian'ny olona intsony ,. Vokatr'izany dia nipoitra ireo tamba-jotra fifandraisana 3G sy 4G. Ary amin'ny fisian'ireto tambajotra ireto dia namolavola olona ny telefaona finday miaraka amina asany mifanaraka amin'izany. Izay no ampiasainay ankehitriny. Ity karazana finday ity dia manana fampiharana bebe kokoa, toy ny fihainoana hira sy fijerena horonan-tsary.